Mogadishu Journal » 2018 » June » 13
Mjournal :-Dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ayaa weerar hubeysan ku qaaday caawa fiidkii fariisin ay ciidamada xoogga dalka ku lahaayeen degmada Huriwaa ee magaalada Muqdisho. Dagaalka ayaa waxaa uu ka dhacay isgoyska Sos halkaa oo salaada Maqrib kadib uu dagaal xoog leh ka...
Waqooyiga Amerika oo marti-gelinaya koobka adduunka 2026
Mjournal :-Dalalka Mareykanka, Canada iyo Mexico oo wada-jir ah ayaa ku guuleystay marti-gelinta koobka kubadda cagta adduunka ee 2026, kadib codbixin maanta ka dhacday dalka Ruushka, oo berrii u ka furmayo koobka adduunka. Saddexdan dal ayaa ka adkaaday dalka Morocco, oo ah kan...
Taliyaha ciidamada xoogga oo gaaray Kismaayo
Mjournal :-Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeye Gaas C/wali Jaamac Warsame Gorod ayaa goordhow gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ah ee maamulka Jubbaland. Ujeedka uu taliyaha u gaaray magaalada Kismaayo ayaa waxay tahay sidii uu ugu kuur geli lahaa xaalada...
Mjournal :-Wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland,Cabdiweli Maxammed Cali(Gaas) ayaa xilka looga qaaday agaasimayaashii hay’adaha PSS IYO PIA ee Puntland. Halkaan hoose ka akhriso wareegtada. Madaxweynaha Puntland oo Xilka Qaadis Ku Sameeyay Agaasimayaas...
Mjournal :-Wararka naga soo gaaraya degaanada maamulada Somaliland iyo Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in saacaddihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen Afduubyo loo geystay dhalinyaro kasoo kala jeedda labada maamul. Labo dhalinyaro ah oo kasoo jeedda degaanada maamulka Puntland ayaa...
Mjournal :-Madaxweynaha Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa xalay la kulmay dalladaha ay ku midaysanyihiin culimada Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay in ay dardar geliyaan kaalintooda kaga aaddan dagaalka ka dhanka ah afkaaraha xagjirnimada ah. Madaxweynaha ayaa sheegay in wadajirka iyo...
Muqdisho : HN :-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xalay kormeerkiisii caadiga ahaa wuxuu ku tagay qaar ka mid ah isgoysyada Muqdisho, xarunta dambi baarista ee CID-da, xarunta taliska ciidamada nabadgelyada wadooyinka, xarunta tababarka...